267s Kugadzira yezana ramakore 9th Iraqi lustreware ndiro replica images and subtitles
Ini ndi Andrew Hazelden uye ndanga ndiri muumbi kweanopfuura makore makumi matatu. Ini ndinofunga iye wekufarira ne luster munhoroondo ndezvekuti ivo vaigadzira goridhe kunze kweiyo yakanga isiri yegoridhe uye ivo vaifungidzirwa semasekista. Iwe unonzwa iwe unogona kupererwa mukati mukutarisa kusakara kwehari yekuumbwa izvo zvinoita kuti iwe ufunge kuti uri mune imwe nyika. Iyo luster ndiyo nzira iyo iwe yaunoshandisa simbi sulphides kugadzira iridescent pamusoro poto. Iyo nzira inoverengeka uye yakaoma kunzwisisa. Iyi ndiro ikopi yehari yekutanga ye9 Iraq. Ini ndakanyatsoishandisa mukugadzira ndiro iyi yevhu kubva kuItaly kubva kuDeruta inova iri buff color. Saka ini ndinotora bhora revhu iri inongodarika kilogiramu pakurema uye yakakandirwa pagumbo remuumbi uye zvinogona kutora maminitsi mashanu kukanda chimiro. Chasara kwemazuva mashoma kuti ganda riome. Kamwe kana ganda rakaomarara rinotendeuka uye kuti rutsoka rwakatendeuka. Kana rutsoka ruchinge rashandurwa ndiro inofanirwa kuve yakaomeswa muZuva uye shure kweizvozvo iine yekutanga kupfura inova bhisikiti kupfura zvobva zvatorwa ndokunyudzwa mumwena wakachena iyo inonyanya kuve tin oxide kuti iite chena chobva chakandwa zvekare. Maitiro anotevera kuapenda neye luster pigment. Iyo pigment yandiri kushandisa kupenda iyi ndiro inonyanya kugadzirwa nemhangura sulphide asi iinewo sirivheri mairi uye ichagadzirwawo neiyo tsvuku oxide nevhu. Iyo yozobva yatemwa saka yakadzoserwa kune inenge inopisa kupisa - 650 centigrade. Mushure mokunge yaverengerwa inotorwa uye pasi uye uye zvobva zvasanganiswa nevhiniga ndipo painobva yapendwa. Iyo dot dhizaini yakateedzeredzwa kubva muzana uno we9th century Iraq. Muchokwadi maitiro ekuita mabhureki avakashandisa uye vachiedza kushandisa imwe bhurashi. Kubhururuka kwe luster kunoda kiln ine kugona kudzikisa oksijeni urikuyedza kuti ugadzire mhepo isina mweya izvo zvinoderedza pigment kuti vabudise sirivheri nendarira. Unogadzira utsi Maitiro andinoita iwayo ndeyekuisa tumapango tudiki muiri kari kuburikidza negomba rekupfura uye izvozvo zvinodzinga oksijeni. Ipapo iwe unobvumira iyo okisijeni kuti ipinde mukati kwenguva pfupi kuti ibvise mukamuri uye kuti oxidation uye kuderedza spasm kwakakosha kuti ugadzire iridescence iri muhari. Kana poto yacho yabuda muhuswa kiln ichitoita kunge ivhu chete yakafukidzwa nevhu iwe unobva wafanira kubvarura ocher yacho neine neinobvisira. Unosvika pakuziva ipapo kuti kuputika kupfura kwashanda here kana kuti hakuna nekuti kana chashanda unotanga kuona iridescent tsvuku kana sirivheri. Saka ndicho chikamu chemashiripiti zvikuru kubvisa kubva muhari mushure mekupfura hauna chokwadi kuti chii chichaitika uye mhedzisiro yacho haifungidziriki asi ndiko kudzikisira kunoita kunge kune hupenyu hwayo. Iwe unofanirwa dzimwe nguva kurongedza hari kune iyo yekuenda kune mwenje kuti uone kusakwana saka zvichienderana nekona yaunobata muhari zvinoenderana nekuti iwe unoona kusakwana kana kuti kwete. Saka zvinoita kunge chisinganzwisisike chiri kuitika
Kugadzira yezana ramakore 9th Iraqi lustreware ndiro replica
< start="7.76" dur="5.24"> Ini ndi Andrew Hazelden uye ndanga ndiri muumbi kweanopfuura makore makumi matatu. >
< start="13" dur="3.96"> Ini ndinofunga iye wekufarira ne luster munhoroondo >
< start="16.96" dur="2.42"> ndezvekuti ivo vaigadzira goridhe >
< start="19.38" dur="2.2"> kunze kweiyo yakanga isiri yegoridhe >
< start="21.58" dur="2.8"> uye ivo vaifungidzirwa semasekista. >
< start="24.38" dur="1.92"> Iwe unonzwa iwe unogona kupererwa mukati >
< start="26.3" dur="2.96"> mukutarisa kusakara kwehari yekuumbwa >
< start="29.26" dur="5.4"> izvo zvinoita kuti iwe ufunge kuti uri mune imwe nyika. >
< start="34.66" dur="5.28"> Iyo luster ndiyo nzira iyo iwe yaunoshandisa simbi sulphides >
< start="39.94" dur="4.8"> kugadzira iridescent pamusoro poto. >
< start="44.74" dur="4.06"> Iyo nzira inoverengeka uye yakaoma kunzwisisa. >
< start="48.8" dur="6.14"> Iyi ndiro ikopi yehari yekutanga ye9 Iraq. >
< start="54.94" dur="7.92"> Ini ndakanyatsoishandisa mukugadzira ndiro iyi yevhu kubva kuItaly kubva kuDeruta >
< start="62.86" dur="4.8"> inova iri buff color. >
< start="67.66" dur="1.46"> Saka ini ndinotora bhora revhu iri >
< start="69.12" dur="4.48"> inongodarika kilogiramu pakurema uye yakakandirwa pagumbo remuumbi >
< start="73.6" dur="7.2"> uye zvinogona kutora maminitsi mashanu kukanda chimiro. >
< start="80.8" dur="4.58"> Chasara kwemazuva mashoma kuti ganda riome. >
< start="85.38" dur="4.33"> Kamwe kana ganda rakaomarara rinotendeuka uye kuti rutsoka rwakatendeuka. >
< start="89.71" dur="5.77"> Kana rutsoka ruchinge rashandurwa ndiro inofanirwa kuve yakaomeswa muZuva >
< start="95.48" dur="5.12"> uye shure kweizvozvo iine yekutanga kupfura inova bhisikiti kupfura >
< start="100.6" dur="4.54"> zvobva zvatorwa ndokunyudzwa mumwena wakachena >
< start="105.14" dur="3.689"> iyo inonyanya kuve tin oxide kuti iite chena >
< start="108.829" dur="3.651"> chobva chakandwa zvekare. >
< start="112.48" dur="4.16"> Maitiro anotevera kuapenda neye luster pigment. >
< start="116.64" dur="7.26"> Iyo pigment yandiri kushandisa kupenda iyi ndiro inonyanya kugadzirwa nemhangura sulphide >
< start="123.9" dur="4.46"> asi iinewo sirivheri mairi >
< start="128.36" dur="4.86"> uye ichagadzirwawo neiyo tsvuku oxide nevhu. >
< start="133.22" dur="6.96"> Iyo yozobva yatemwa saka yakadzoserwa kune inenge inopisa kupisa - 650 centigrade. >
< start="140.18" dur="3"> Mushure mokunge yaverengerwa inotorwa uye pasi uye >
< start="143.18" dur="6.72"> uye zvobva zvasanganiswa nevhiniga ndipo painobva yapendwa. >
< start="150.12" dur="6.06"> Iyo dot dhizaini yakateedzeredzwa kubva muzana uno we9th century Iraq. >
< start="156.18" dur="4.6"> Muchokwadi maitiro ekuita mabhureki avakashandisa uye vachiedza kushandisa imwe bhurashi. >
< start="160.78" dur="6.15"> Kubhururuka kwe luster kunoda kiln ine kugona kudzikisa oksijeni >
< start="166.93" dur="3.59"> urikuyedza kuti ugadzire mhepo isina mweya >
< start="170.52" dur="5.68"> izvo zvinoderedza pigment kuti vabudise sirivheri nendarira. >
< start="176.2" dur="1.46"> Unogadzira utsi >
< start="177.66" dur="6.96"> Maitiro andinoita iwayo ndeyekuisa tumapango tudiki muiri kari kuburikidza negomba rekupfura >
< start="184.62" dur="2.84"> uye izvozvo zvinodzinga oksijeni. >
< start="187.46" dur="4.68"> Ipapo iwe unobvumira iyo okisijeni kuti ipinde mukati kwenguva pfupi kuti ibvise mukamuri >
< start="192.14" dur="9.069"> uye kuti oxidation uye kuderedza spasm kwakakosha kuti ugadzire iridescence iri muhari. >
< start="201.5" dur="5.129"> Kana poto yacho yabuda muhuswa kiln ichitoita kunge ivhu chete >
< start="206.629" dur="2.351"> yakafukidzwa nevhu >
< start="208.98" dur="8.82"> iwe unobva wafanira kubvarura ocher yacho neine neinobvisira. >
< start="217.8" dur="5.4"> Unosvika pakuziva ipapo kuti kuputika kupfura kwashanda here kana kuti hakuna >
< start="223.2" dur="4.4"> nekuti kana chashanda unotanga kuona iridescent tsvuku kana sirivheri. >
< start="227.6" dur="5.43"> Saka ndicho chikamu chemashiripiti zvikuru kubvisa kubva muhari mushure mekupfura >
< start="233.03" dur="5.51"> hauna chokwadi kuti chii chichaitika uye mhedzisiro yacho haifungidziriki >
< start="238.54" dur="5.6"> asi ndiko kudzikisira kunoita kunge kune hupenyu hwayo. >
< start="244.18" dur="7.1"> Iwe unofanirwa dzimwe nguva kurongedza hari kune iyo yekuenda kune mwenje kuti uone kusakwana >
< start="251.28" dur="2.819"> saka zvichienderana nekona yaunobata muhari zvinoenderana nekuti >
< start="254.099" dur="2.421"> iwe unoona kusakwana kana kuti kwete. >
< start="256.52" dur="7.42"> Saka zvinoita kunge chisinganzwisisike chiri kuitika >